Iibinta ku dhowaad 40% saamiga caasimadda idman ee Lam Weston Belaya Dacha LLC waa la dhammaystiray - Magazine Nidaamka Baradhada
Shirkadda Dutch "LVM CIES B.V." dhammaystiray heshiis si loo helo ku dhowaad 40% saamiga caasimadda idman ee soo saaraha shiilan ee Faransiiska Lipets Lam Weston Belaya Dacha LLC, ayaa ka socota Diiwaanka Midaysan ee Gobolka ee Hay'adaha Sharciga.
Isbedelada diiwaanka waxaa la sameeyay Diisambar 18-keedii. Hadda Nederland waxay leedahay saamiga 74,9%, inta soo hartay 25,1% waxaa gacanta ku haya Vladimir Tsyganov, oo xubin ka ah guddiga maamulka Belaya Dacha Group.
Markii hore, FAS waxay ansixisay arjiga "LVM CIES B.V." kordhinta saamiga caasimada idman ee shirkada Lipetsk. Kahor isbeddelada u dhigma, Nederlandku waxay lahaayeen 35,52%. Milkiilaha ugu badan wuxuu ahaa Belaya Dacha JSC (64,48%).
Shirkadda lafteeda ayaa u sharraxday wakaaladda macluumaadka ganacsiga ee Abireg in “mashruuca Lipetsk uusan hadda ahayn mashruuc White Dacha ah.
Waa in la ogaadaa in tan iyo markii la aasaasay hay'adda sharciga ee Lipetsk, Belaya Dacha iyo shirkadda Nederland mid kastaaba wuxuu lahaa 75% iyo 25%, siday u kala horreeyaan. Si kastaba ha noqotee, dhammaadka 2018 LVM CIES B.V. lagu dalbaday FAS codsi ah in la kordhiyo saamiyada raasumaalka la oggol yahay ee shirkadda. Sannadkii 2019, shirkadda Dutch-ka waxay billowday inay yeelato 31,13% saamiga, markii dambena - 35,52%.
Tags: "Lam Weston Belaya Dacha"processing baradhoWax soo saarka shiilan ee Faransiiska
Wadooyinka Tareenka ee Ruushka waxay yareyn doonaan canshuuraha lagu qaado gaadiidka miraha iyo khudaarta sanadka 2021
Sharciga xakamaynta dawada ee maaraynta sunta cayayaanka iyo agro-kiimikooyinka la ansixiyay